हाम्रो बारे - Axnew प्रदर्शन प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड।
Axnew प्रदर्शन प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
Axnew प्रदर्शन प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड प्रदर्शन प्रविधि मा एक नेता रूपमा यसको आफ्नै औद्योगिक प्रदर्शन बजार विकास भएको छ।
2009 देखि, Axnew प्रदर्शन प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड प्रदर्शन प्रविधि मा एक नेता रूपमा यसको आफ्नै औद्योगिक प्रदर्शन बजार विकास भएको छ। वर्ष पेशेवर अनुभव, बिक्री विभाग हाम्रो ग्राहकहरु गर्न प्राविधिक सहयोग र व्यावसायिक सुझाव प्रदान गर्दछ, आर एन्ड डी टिमवर्क सधैं डिजाइन राम्रो समाधान प्रयास र हाम्रो ग्राहकहरु प्रदान गरिएको छ, हाम्रो विकास एक / डी बोर्ड र स्वामित्व मनिटर औद्योगिक परीक्षण पारित गर्दै छन् र इस्वी संवत् पायो , एफसीसी, ROHS प्रमाणपत्रहरू।
उत्पादन समूह आपूर्तिकर्ता मा धनी इलेक्ट्रनिक घटक र स्रोतसाधन, मालिक धेरै लाभ प्रदान गर्नेछ धेरै हामीलाई सक्षम हुनेछ भन्ने उपकरण, अधिक कुशल उत्पादक, प्रभावकारी र सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन जो गर्नेछ, Axnew र हाम्रो ग्राहकहरु बीच साझेदारी बलियो हुनेछ हो हामीलाई वैश्विक आपूर्तिकर्ता।
हाल हामी संसारभरि यो औद्योगिक प्रदर्शन लाइन मा ग्राहकहरु संग लामो सम्बन्ध स्थापित गरेको छ।
AXNEW प्रदर्शन प्रदर्शनियों मार्फत हाम्रो व्यापार developes, Alibaba, तेजी यी years.We 50 भन्दा बढी देशका orginal उपकरण निर्माता, नियन्त्रण उपकरण उद्योग, स्वचालन आवेदन प्रयोगकर्ताहरूको हुन्छन् कि ग्राहकहरु विश्वसनीय छन् ग्लोबल स्रोत B2B मंच।
हामी हाम्रो निगरानी र अनुकूलित displays.Our स्थिर आपूर्तिकर्ता हो मुख्य रूप Auo, तेज, Chimei, BOE, सैमसंग, एलजी प्यानल लागि, विशेष गरी औद्योगिक ग्रेड नयाँ र मौलिक प्यानल प्रयोग जिद्दी।
अनुकूलित उत्पादनहरु हाम्रो advantaged व्यापार हो। ग्राहकहरु हामीलाई आफ्नो विचार बारेमा कुनै जानकारी साझेदारी र हामीलाई मानक उत्पादनहरु परिमार्जन गरौं सकेन।
लोकप्रिय र राम्रो उत्पादनहरु को Axnew आत्मा प्रत्ययनीय सेवा सिद्धान्तहरूले हामीलाई राम्रो गर्न मद्दत गर्छ।
● औद्योगिक ग्रेड मनिटर समाधान
फ्रेम एलसीडी समाधान खुला ●
● औद्योगिक स्पर्श मनिटर समाधान
उच्च चम्किलो प्रदर्शित ●
● टच प्यानल पीसी समाधान
2009 मा, Axnew'main उत्पादनहरु एलसीडी प्यानल 'व्यापार व्यवसाय र खुला फ्रेम मनिटर को मानक आकार हो।
2012 मा, Axnew हाम्रो औद्योगिक ग्रेड मनिटर विकास गर्न 3-4 प्राविधिक ईन्जिनियरहरु छ। हामी कठोर काम वातावरण हाम्रो प्रदर्शन समर्थन गर्न, व्यापक तापमान (80 डिग्री गर्न -25 डिग्री) हाम्रो आफ्नै औद्योगिक नियन्त्रक बोर्ड विकास गरे।
2014 मा, हाम्रो लोकप्रिय उत्पादन आउटडोर आवेदन समर्थक-capacitive स्पर्श मनिटर, प्यानल लागि IP65 अगाडि bezel संग औद्योगिक touchs माउन्ट, उच्च brightess प्रदर्शनहरू जो% लगभग 45 -50% निर्यात मात्रा लिन छन्।
Axnew सफलतापूर्वक संसारभरि यो औद्योगिक प्रदर्शन लाइन मा ग्राहकहरु संग लामो सम्बन्ध स्थापित। सबै प्रदर्शित इस्वी संवत्, एफसीसी, RoHS अनुपालन संग छन्।
2016 मा, Axnew हाम्रो व्यापार विस्तार र हाम्रो ग्यारेन्टी सेवा, जर्मनी ले केही साझेदार gurantees, क्यानाडा आधारभूत मर्मतका गर्न सक्ने, हाम्रो मुख्य उत्पादन र ग्यारेन्टी सेवा चीन मा छन्।
यसबाहेक, हांगकांग इलेक्ट्रनिक प्रदर्शन, ताइवान Computex, शाङ्घाई टचस्क्रिन प्रदर्शन आदि हाम्रो उत्पादनहरु स्पष्ट देखाउन मदत हुनेछ। B2B मंच, उदाहरणका लागि Alibaba हाम्रो ग्राहक सजिलै ट्रेडों दिन हुनेछ।
वर्ष पेशेवर अनुभव, हामी 40 भन्दा बढी देशका orginal उपकरण निर्माता, नियन्त्रण उपकरण उद्योग, स्वचालन आवेदन प्रयोगकर्ताहरूको हुन्छन् कि ग्राहकहरु विश्वसनीय छन्।
अब हामी युरोप मा पहिलो distrubutor तयार छन्। Axnew भवदीय आफ्नो सहयोग गर्न तत्पर देखिन्छ!
हाम्रो Axnew टोली प्रवासी बिक्री दल, घरेलु बिक्री टोली, आर एन्ड डी केन्द्र, वित्तीय विभाग, मानव संसाधन विभाग, उत्पादन कारखाना हुन्छन्।
हामी व्यावसायिक अनुभव, बिक्री विभाग र प्राविधिक टोलीले हाम्रो ग्राहकहरु गर्न प्राविधिक सहयोग र व्यावसायिक सुझाव प्रदान वर्ष संग युवा टीम हो।
हाम्रो कारखाना2उत्पादन लाइनहरु, 1 बलिरहेको कोठा,2भंडारगृहों, साफ कोठा कार्यशाला हुन्छन्।
जसलाई Axnew साथ ग्राहकहरु कि व्यापार बाहेक हाम्रो लामो अवधि समर्थन पाउन हुनेछ।
खुला हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ!
तपाईं हाम्रो कम्पनीको उत्पादन रुचि हो 1.Once, कृपया जांच गर्न संकोच छैन हामीलाई .हाम्रो बिक्री विभाग प्राविधिक सहयोग र 48 घण्टा भित्र तपाईं व्यावसायिक सुझाव प्रदान गर्दछ; आर एन्ड डी टिमवर्क सधैं डिजाइन प्रयास र तपाईं राम्रो समाधान प्रदान गरिएको छ।
2.Every क्रम पनि सानो वा थोक मात्रा हाम्रो प्रशोधन तालिका र उत्पादन को लागि प्रक्रिया, जो कडाई उद्योग स्रोत योजना संग accords (ईआरपी) अनुपालन विषय हुनेछ।
3.Professional सेवा सहायक आफ्नो माल अवस्था र आफ्नो पछि बिक्री स्थिति ट्रयाक थियो। हामी ईमानदारी हाम्रो प्रत्ययनीय सेवा सिद्धान्तहरू हाम्रो आपसी सहयोग सम्बन्ध स्थापित गरौं भनेर आशा।
हाम्रो आदेश 4.For, हामी मुख्य रूप तिनीहरूलाई ग्यारेन्टी सर्तहरू मा तिनीहरूले आफ्नो गन्तव्य आइपुगेको पछि राखे। त्यसपछि तिनीहरूले ग्यारेन्टी भित्र doÃ र RMA सेवाहरू हुनेछ। सामान्यतया 1 वर्ष वारेन्टी मानक आदेश लागि, हामी2वर्ष वारेन्टी गर्न हामी हाम्रो ग्राहकहरु संग सहमत यदि विस्तार गर्न सकिएन। ग्यारेन्टी3वर्ष केही विशेष परियोजनाका लागि सँगै छलफल हुन सकेन।
ठेगाना: फोर्थ फ्लोर, यिन लियान ट T्ग इन्डस्ट्रियल पार्क, ऐ लियान झाbe्बेई रोड नं 6060 Long; लांग गिरोह जिल्ला, शेन्ज़ेन चीन 185१17१2